G-mail မှာ mailing list ဖွင့်ချင်လို့ - MYSTERY ZILLION
G-mail မှာ mailing list ဖွင့်ချင်လို့
ကျွန်တော်က mail သိပ်မပို့တတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ်တခါတလေ ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီမေလ်းပို့ချင်ပြန်ကော ဒီတော့ စာရိုက်ထည့်ပြီးရင်် သူငယ်ချင်းအကောင့်တွေရိုက်ထည့်ရတာပျင်းလည်းပျင်းတယ်။ အချိန်လည်းမကုန်ချင်ပြန်ဘူး။ နည်းလမ်းလေးများရှိရင်ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ။:106::6::103:
အကုန်လုံးကို တစ်ခါလောက်ပဲရေးပြီးပို့လိုက် ပြီးရင်
နောက်အခေါက်တွေကျရင် ရှေ့ကပို့ခဲ့တဲ့ mail ထဲကနေပြီး
copy & paste လုပ်လိုက်ရုံပေါ့ဗျာ....=))=))=))
မေးထဲကနေပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို group ဖွဲ.ထားလို.ရပါတယ်။ကျွန်တော််မေးထဲမှာဆို
ဒါမှမဟုတ်လည်း all ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်။
အကိုလည်း စိတ်ကြိုက်group ဖွဲ.လို.ရပါတယ်။
တစ်ယောက်ချင်းက အကုန်ရိုက်ဖို့မလိုဘူးထင်တယ်.။ ကျွန်တော့် ချက်လစ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဆို သူတို့နာမည်အစ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ပေါ်လာတယ်လေ. ဥပမာ - [email protected] ဆိုရင် p ဆိုတာရိုက်လိုက်တာနဲ့ p နဲ့စတဲ့ နာမည်တွေ drop down နဲ့ ကျလာတယ်လေ. အဲဒါတွေကို ရွေးသွားရုံပဲကို ကျွန်တော်တော့ အဲလိုပဲ လုပ်တာပဲ.. တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ပို့မယ့်လူနာမည်တောင်မေ့တယ်. :P
Mailing list ကို ကိုမဖွင့်တတ်တာဗျ။:106::106::106:
All နဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးဆီပို့ဖို့
gmail ရဲ့ ဘယ်ဘက် မှာ "contact" tab ကို click ၊ ပြီးရင် All contacts ကိုရွေး ။ အဲဒါဆိုရင် ဘေးက list ရဲ့ အပေါ်မှာ select all,none မှာ All ကို click လိုက်ရင် သူ့ညာဘက်ဘေးမှာ _ Contacts Selected ဆိုပြီးပြလိမ့်မယ်။ သူ့အောက်က Email ကို click ရင် သူငယ်ချင်းအားလုံးရဲ့ account တွေ To: ထဲမှာ အဆင်သင့်ထည့်ပြီးသား compose mail tap ဆီရောက်သွားလိမ့်မယ်။
ခုန All Contacts ဆိုတဲ့ tab မှာဘဲ None ကိုရွေးထား။ ပြီးရင် .. e.g... [email protected] ကို check box မှာ click ။ ပြီးရင် ညာဘက် ဘေးက Groups ဆိုတဲ့ list box ထဲက Add to အောက်က New Group ကိုရွေးရင် ကျလာတဲ့ text box မှာ ဖက်တီးသူငယ်ချင်းများ လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်။:P ဖွဲ့ပြီးသား Group ထဲမှာ ထည့်ဖို့ ဆိုရင် Add to အောက်မှာ Group Name ကိုရွေးပေးလိုက်ရုံဘဲ။ အဲဒီ Group မှာ မပါစေချင်တော့ရင် Remove from အောက်မှာ ပြန်ရွေးပေးလိုက်။ mz က သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် MZ Members ဆိုပြီး Group Name လုပ်ပြီး ထည့်ထားလိုက်ပေါ့။ သူ့ Group နဲ့သူဆိုတော့ ပထမတစ်ကြိမ် Group ဖွဲ့ ရတာ ထည့်ရတာ အလုပ်ရှုပ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း မေးလ်ပို့ဖို့ အရင်လိုတဲ့အခါ မြန်မြန်ပြီးတယ်ဗျ။
Copy & Paste lote lite